‘चरित्रच्युत अभियान’ सूची बोकेर गल्लीगल्लीमा विदेशी जासुस « Janata Samachar
‘चरित्रच्युत अभियान’ सूची बोकेर गल्लीगल्लीमा विदेशी जासुस
प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७६, बिहीबार १४:३९
कुरा कोट्याउँ, सभामुख प्रकरणबाट । कृष्णबहादुर महरा सर, तपाईं यतिविघ्न बदनाम हुनुभयो कि समाजले तपाईंलाई बिर्सन एक युग लाग्नेमा शंका छैन । चाहेर पनि तपाईंलाई भुल्न सक्दैन समाज । तपाईंको चरित्र रफुमा ठूलै टोली परिचालन त भइरहेको छ तर तत्काल क्षतिपूर्ति सम्भव नै छैन । नेकपा पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि महसुस गर्नुभयो, ‘अब कुनै रक्षाकवचले जोगाउन सक्दैन ।’ त्यसकारण राजीनामा गराउने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।
कपडामा आगो लुक्दैन । सभामुख यौन दुराचार प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न अब बालसुलभ कार्य पनि ठहरिँदैन । अपराध लुकाउने–दबाउने कुत्सित प्रयास कानुनी राज्यको उपहासमा जोडिन्छ । यस्तो ‘काज’ षड्यन्त्र र चातुर्यमा दरिनेछ । महरा सरलाई पनि ज्ञात छ, ‘दलदलबाट जति निस्कने कोसिस गर्‍यो उति जाकिँदै गइन्छ ।’ उखानै छः जति गिजोल्यो उति गन्हाउँछ । यो दलदलबाट बाहिर निस्कन असम्भव छ ।
मार्क्सवादका महान अनुयायी नेकपाका नेताहरु
सबैलाई थाहा छ, स्वर्ण मृग कतै हुँदैन तर पनि हामीभित्रको राम स्वर्ण मृगको पछि कुद्छ । स्वर्ण मृगको पछि कुद्ने हो भने दुर्घटना दोस्रो विन्दु र त्यसपछिको परिणाम अन्तिम क्षति हुनेछ । अर्थात सीताको चोरी जस्तै अन्तरआत्माको पतन । भौतिक विज्ञानका अनुयायी कमरेडहरुलाई अध्यात्मको यो उक्ति मीठो पनि नलाग्ला । तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानमा सत्ता, शक्तिको प्रमाद तथा मानवीय आत्माभित्र उत्ताल वेगले कुद्ने अनियन्त्रित अश्वलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै सूत्र छैन । बेलाबखत तपोवन जानु हुने माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आत्मनिरीक्षणको आध्यात्मिक गुह्य सूत्र भने बोध होला । महरा सरका लागि अब एकमात्र मार्ग बाँकी छ । त्यो मार्ग होः प्रायश्चित, चित्तशान्ति । सुनेको छु, तपोवनमा यौन, यौनिकता, प्रेम, शान्ति र अहिंसा बोध गराइन्छ । महरा सरका लागि तपोवन उत्तम स्थान हुनसक्छ । बोधले मात्र मुक्ति प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै कमरेडको विमति नहोस् पनि ।
सामाजिक मान्यता, महरा सरको पदीय गरिमा र उमेर सुहाउँदो आचरणले परस्त्रीगमनको छुट दिँदैन । फ्रायड मनोविज्ञानका अध्येता, ओशो मार्गका मर्मज्ञ सन्यासी वा पूँजीवादी समाजले पचाएको विवाहेत्तर सम्बन्धको तर्क तथा दुहाई दिएर पनि महराको बचाउ गर्न सकिँदैन । किनकी महरालाई पशुले पनि नगर्ने दुष्कर्म ‘बलात्कार’को हाकाहाकी र हाताहाती आरोप लागेको छ ।
पूँजीवाद र समाजवाद दुवै पक्षका अभियन्ता तथा विचारकहरुले सम्मान गर्ने र मेरो आचरणयुक्त जीवन नै मेरो सन्देश हो भन्ने महात्मा गान्धीले जीवनभर ब्रह्मचार्यको साधना गरे तर असफल रहे । जीवनको उत्तरार्धमा गान्धीले यौवनाहरुसँग कैयन रात नग्न बिताए । जसलाई ब्रह्मचार्यका लागि तन्त्रसाधनाको उपमा दिइयो । यो प्रसङ्ग गान्धीले आफैँले लेखेको आत्मवृतान्तमा उल्लेख छ । ओशो भन्नुहुन्छः भोगले बोध र बोधले मात्र वैराग्य जन्मिन्छ ।
नेपाली समाज सुक्ष्म अनुगमन र व्यग्र प्रतीक्षामा छ । महरा प्रकरणको कानुनी प्रकृया कसरी अगाडि बढ्ला ? कानुनी राज्य र न्यायका हिमायति जो सुकैले पनि भन्नैपर्छ, ‘राज्यले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने मान्यता अक्षरशः पालना गरोस् ।’ महरा सरसँग आत्मीयता राख्नेले सहानुभूतिमा नैतिकता दाउमा राखेर साथ दिन सक्छन् र तुलसी दासका यी पदावली दोहोर्‍याउन पनि सक्छन्, ‘जस करणि तस् भोगहु ताता–नर्क जात क्यु पछताता ?’
निवर्तमान हुनु भएका सभामुख महराको कर्तुत ढाकछोपमा जति प्रयत्न गरे पनि छताछुल्ल भइदियो । किनकी महराका पछिल्तिर विदेशी जासुसी संस्थाहरु तैनाथ थिए । महराको कमजोरी र महरा गुज्रिने गल्ली पहिलेदेखि ‘रेकी’ भइसकेको थियो । जुन पत्रकार मित्रले सभामुख महराको कर्तुत बाहिर ल्याउनु भयो उहाँलाई घटनाबारे सूचना दिने व्यक्ति र निकाय विदेशी जासुस नै थिए । सोमबार बिहान एक जनताकर्मीलाई पनि विदेशी बजेटबाट तलब खानेले फोनबाट सूचना दिएका थिए ‘सभामुख महराले एक महिलालाई बलात्कार गरेका छन्, पत्ता लगाउनुस् ।’ पीडित महिलासँग भेट्ने उपाय हामीले पनि सोधेका थियौँ तर सूचनादाताले हामीलाई भनेनन् । तथापि हामीले आफ्ना तर्फबाट पीडित पत्ता लगाएर भेट्ने भरमग्दुर यत्न गरेका थियौँ । जनताकर्मीले नपाएको पीडितको परिचय र तीनकुनेको वारदात स्थलसहितको सूचना ती पत्रकार मित्रले पाए । सूचनाको स्रोत एउटै हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरु ढुक्क भइसक्नु भयो होला ।
मधेसमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘होसियार मुसाफिर होसियार– काल घुमत है गली गली ।’ अर्थात गल्ली गल्लीमा यमराज घुमिरहेको छ । सावधन मृत्युसँग जुनसुकै मोडमा जम्काभेट हुन सक्छ । नेकपाका दुई तिहाईका शक्तिप्राप्त नेताहरुले यो मैथिली उखानको अर्थ र मर्म आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको गल्ली गल्लीमा विदेशी जासुस समाजसेवी आवरणमा सक्रिय छन् । नेपालबाट कम्युनिष्ट क्षयीकरण गर्ने पूँजीवादको शस्त्रागारमा कुनै हतियार बाँकी रहेन । सरल र प्रभावकारी शस्त्र प्रयोग गरियो चरित्रच्युत र कम्युनिष्ट आचरण स्खलित गराउने ।
नेताज्युहरु, अपराध गरेपछि भत्भती पोल्ने व्यथा अपराध गरिसकेपछि बोध भएर के काम ? अहिले महरा सरको मथिंगलमा ग्लानीले इपिसेन्टर बनाइरहेको होला । समाजमा उच्च पदस्थ व्यक्तिले गरेको यौन अपराध र त्यसको परिणामस्वरुप जीवनभरको तमाम सुकर्ममा मोसो दलिएको दृष्टान्तका रुपमा महरा काण्ड दीर्घ समयसम्म टंकण भइरहने छ । तर सर्वप्रथम सचेत हुन जरुरी छ नेकपा लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु । समाजले सामान्य र अन्यान्य राजनीतिक विचारबाट अभिप्रेरित व्यक्ति वा व्यक्तित्वभन्दा कम्युनिष्टबाट इस्पातिलो अनुशासन अपेक्षा गर्नु किमार्थ अस्वाभाविक होइन । तर उच्च पदस्थ कम्युनिष्ट नेताबाटै अकल्पनीय कुकर्म भएपछि विचरा आस्थावानहरु अक्क न वक्क हुने नै भए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु महराबाहेक अन्य कोही पनि परस्त्रीगमनमा लिप्त छैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर को को छन् भनेर नाम किटेर भन्न पनि कठिन छ । दुई चार घण्टा राजधानीको नेता कार्यकर्ताको जमघट हुने केही होटलतिर उभिँदा पनि थाहा हुन्छ । त्यहाँ मौनता साँधेर युवा नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नै अग्रज नेताहरुबारे गरेका टिकाटिप्पणि सुन्दा पनि ज्ञात हुन्छ, ‘पाका कम्युनिष्ट र अन्य राजनीति दलका पनि केही नेताहरुको नउघारिएको चरित्र ।’ विदेशी जासुसहरुले त झन् एक एक कम्युनिष्ट नेताहरु हिँड्ने बदनाम गल्लीको फेहरिस्त बनाएर बसेका छन् ।
नेता ज्युहरु सचेत हुनुहोस् । हातखुट्टा समेट्नुस् । बद्नाम गल्लीको यात्रा रोक्नुस् । नत्र एक गल्लीबाट उठेको बद्नामीको धुवाँ सहस्र गल्लीमा फैलिन्छ । तपाईं आफू जुठो लोटाएको गोबरसरह बन्नु हुनेछ । सिंगो पार्टी पनि रछानमा पुग्ने छ । एक दुई घटनालाई अपवाद भनिएला लगातार यस्तै घटना दोहोरिँदै गयो भने जनताको मनमा कम्युनिष्ट पार्टी र ती पार्टी बनाउन जीवनभर लागेका नेताहरुको छविबारे कस्तो धारणा बनाउलान् ? यौन दुराचारलाई कम्युनिष्ट व्यशन बनाउन उदत नहुनुहोस् । परस्त्रीगमनमा पल्किएका केही कम्युनिष्ट नेताहरुको पर्दा पछाडिको जीवनबारे कार्यकर्तालाई पनि भेउ छ । विदेशी जासुसहरुले पनि सूची बनाएकामा अब शंका रहेन । ६१ वर्षीय महरा सर त ढल्नुभयो भने अरु के बाँकी बस्लान् र ? समयमै अन्यको चेत फर्कियोस् । विदेशी जासुसले चाहे महरा सरको दुर्गति अरु नेतामा पनि ‘हिजोआजको कुरा’को शृंखला नै बनाइदिन सक्छन् । त्याग, तपस्या, जेलनेल र कष्टसाध्य भूमिगत जीवनको आधारशिलामा ‘ईश्वर’ ठानिएका कम्युनिष्ट नेताहरु समाजमा घृणाका पात्र बन्दा घर, समाज र देश भाँडिन्छ, जुन विदेशी जासुसहरुको अन्तिम लक्ष्य हो ।